China VIP Cooler Box စက်ရုံနှင့်ထောက်ပံ့သူများ Huizhou
VIP အအေးသေတ္တာသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမပါဘဲ passive insulator တွင်ရှိသောအပူသေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အအေးသို့မဟုတ်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အပူစီးကူးမှုနှုန်းနိမ့်သောကြောင့်ဆေးဝါးများတင်ပို့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ဂျယ်လ်ရေခဲထုပ်နှင့်အုတ်နှင့်အတူအသုံးပြုကြသည်။ ။
၁။ VIP အေးသေတ္တာသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမပါဘဲ passive insulator တွင်ရှိသောအပူသေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အအေးသို့မဟုတ်အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အပူစီးကူးမှုနှုန်းနိမ့်သောကြောင့်ဆေးဝါးများတင်ပို့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ဂျယ်လ်ရေခဲထုပ်နှင့်အတူအသုံးပြုကြသည်။ နှင့်အုတ်။
၂.Vacuum insulation board (VIP board) သည်လေဟာနယ် insulator တွင်လည်းပါဝင်ပြီး၊ အဓိကအားဖြည့်ပစ္စည်းများနှင့်လေဟာနယ်ကာကွယ်ရေးမျက်နှာပြင်အလွှာတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်လေထုအပူရှိန်ကြောင့်လေပူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပူလွှဲပြောင်းခြင်းကိုထိရောက်စွာရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ရိုးရာအပူလျှပ်ကာပစ္စည်းများ၏အပူစီးကူးမှု၏ 1/10, 0.002-0.004W / mk အထိလျှော့ချ။ ပြီးတော့အဓိကဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုဖန်မျှင်နှင့်အမျှင်ဓာတ်ငွေ့ဆီလီကွန်တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထုံးစံအတိုင်း VIP cooler box သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များအားအပြည့်အ ၀ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွင်းပိုင်း၊ အလယ်နှင့်အပြင်ပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာအလယ်အလတ်အပူအလွှာဖြစ်ပြီး VIP နှင့် VIP plus PU များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု parameter ဇယားကိုဖတ်ပါ။
4. ဤထူးခြားသော VIP အင်္ဂါရပ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ VIP အအေးသေတ္တာများသည်ရှုပ်ထွေးပြီးဘေးကင်းလုံခြုံသောဆေးနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များအတွက်ဂရုတစိုက်တီထွင်ထားသောကြောင့်အပူချိန်မော်နီတာလိုအပ်သည်။
1.VIP cooler box သည်အေးအောင်မလုပ်ပါ၊ အပူစီးကူးမှုအလွန်နည်းသော VIP cooler box ကိုအများအားဖြင့်ဆေးဆိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့အပူချိန်ထိန်းချုပ်သည့်ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်။
2. သူတို့ကိုစျေးနှုန်းများမြင့်မားသောကြောင့်အခြား high-end, အပူချိန်အထိခိုက်မခံထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာအကောင်းဆုံး insulator တွင်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ 1.The နိမ့်ဆုံးအပူစီးကူး
2. ပိုမိုသေးငယ်သော၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသော၊ နေရာရရန်ရိုးရာအအေးခန်းထက်ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ပိုမိုပါးလွှာသောဘောင်ကွက်ဖြစ်သည်။
၃။ သေတ္တာသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမြှုပ်နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်သေတ္တာအား ပိုမို၍ တာရှည်ခံစေသည်။
4. ကြာကြာအေးသောကြောင့် 72h, 96h, 120h အထိကြာရှည်ခံသည်
၅။ အလွန်ကောင်းမွန်သော insulator တွင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် VIP cooler များသည်အထူးသဖြင့်ဆေးဆိုင်များတင်ပို့ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု: EPP Cooler Box